Ime ụlọ ndị dị na Galicia | Akụkọ Njem
El ime njem ime obodo na Galicia na-arị eluỌ bụghị n'efu ka anyị nọ n'ime obodo nwere mpaghara ime obodo echekwara nke ọma ebe enwere ọdịdị mara mma na ọdịnala na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ya mere ọtụtụ mmadụ ji ahọrọ ịla ezumike nká ụbọchị ole na ole gaa ime ime obodo Galicia, iji nwee obi iru ala nke ebe ndị a wee nwee ike ịkpọtụrụ okike.
Anyị ga-enye gị ụfọdụ Atụmatụ mgbe ị na-achọ ụlọ ime ime obodo na kwa echiche banyere ụlọ ime ime obodo dị na Galicia nke nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ. Ugbu a enwere nnukwu njem nlegharị anya ime obodo ọ gaghị esiri anyị ike ịchọta ebe obibi na ime obodo ndị a n'ime ụlọ ndị na-ejigide amara ha niile.
1 Ndụmọdụ maka ịhọrọ ụlọ ime ime obodo
2 Offọdụ n'ime ime ụlọ kachasị mma na Galicia
2.1 Ise nke San Amaro
2.2 Cabanas na-eme Barranco
2.3 Lọ Rural Rectoral
2.4 Ferlọ Rural A Fervenza
Ndụmọdụ maka ịhọrọ ụlọ ime ime obodo
Otu n'ime ihe ị kwesịrị ịtụle site na mmalite bụ ma ịchọrọ n'ime obodo ma ọ bụ n'ụsọ oké osimiri, ebe ọ bụ na Galicia ụzọ abụọ a dabara. E nwere ime ụlọ ndị dị nso n'ụsọ oké osimiri, iji nwee ike ịnụ ụtọ osimiri ndị dị egwu, mana ndị ọzọ nọ n'ime obodo dịka Ourense na nke na-enyekwa ọdịdị ala dị egwu. Ozugbo ekpebiri usoro a, anyị ga-achọta ezigbo ime ụlọ. Ohere dị na nke a enweghị njedebe, ebe ọ bụ na e mere ụfọdụ maka njem nlegharị anya, ndị ọzọ na-achọ ezumike zuru ezu, enwere ndị agbadoro ndị di na nwunye na ndị ọzọ na njem ezinụlọ. Ọ dị mma ịtụle ụdị njem anyị na-achọ ịchọta ụlọ ga-adabara ihe anyị chọrọ.
Otu ihe ị kwesịrị iburu n’obi bụ na ụfọdụ ụlọ dị na nso nnukwu obodo ma obu obodo ma ndị ọzọ dị nnọọ anya. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ileta ihe ndị ọzọ ma ọ bụ nwee obodo dị nso, anyị ga-emerịrị ụlọ ndị ahọpụtara n'ime ime obodo. Na Galicia enweghi nsogbu, ebe ọ bụ na n'ọtụtụ oge anyị nọ kilomita ole na ole site na obodo ahụ n'ime ime obodo na ebe dị jụụ.
N'oge akwukwo ọ ka mma ime ya tupu oge eruo, karịsịa na ebe ndị na-ewu ewu, dịka ndị dị nso na obodo ndị dị ka Santiago de Compostela. N'oge ọkọchị, enwere njem njem karịa, mana ị ga-eburu n'uche mgbe niile na ọrụ ahụ na-abawanye na ngwụsị izu na na ngwụsị izu.
Offọdụ n'ime ime ụlọ kachasị mma na Galicia
Mgbe ị na-ahọrọ anyị nwere ike inwe ntakịrị mkpalite. Enwere ọtụtụ ụlọ ime obodo dị ka anyị na-ekwu, yabụ ebe a, anyị ga-ahụ ụfọdụ ndị nwere ntụnye na nyocha dị mma, mana nke ahụ apụtaghị na ọ bụ naanị ha bara uru.
Ise nke San Amaro
Anyị na-amalite na otu n'ime ime obodo ụlọ na-enchant na nke a na-ekwu ọtụtụ ihe banyere ya. La Quinta de San Amaro bụ ihe jikọrọ ya na ịdị mma na ịdị mma, emi odude ke Meaño, ke esịt ọwọrọetop Rías Baixas. Mpaghara a gbara ubi vaịn gburugburu bụ ezigbo ebe izu ike ma detụ mmanya ndị ama ama ama ama maka mmalite. Ebe obibi ahụ nwere nnukwu ọdọ mmiri dị n'èzí nke na-anọ na ndagwurugwu, n'ihi ya, a na-atụ aro ka ị gaa na ya n'oge ọkọchị iji mee ihe iji nọrọ. Na mgbakwunye, ebe obibi a na-enyekarị nleta winery na Albariño, nke bụ nnukwu mgbakwunye agbakwunyere. Typicallọ a na-ahụkarị na ya anaghị efusi amara ya ma anyị nwere ike ịchọta ebe dịka patio nnukwu okwute na ebe ochie akpọgharịrị.
Cabanas na-eme Barranco
Ọzọkwa a maara dị ka Cabañitas del BosqueAnyị na-eche ihu ụdị ụlọ ime obodo mara mma nke na-enye ọtụtụ nzuzo, nke e mere maka ndị di na nwunye chọrọ izu ụka izu ụka. Obere ụlọ ndị nwere onwe ha dị na obodo Coruña nke Serra de Outes, na nso ụsọ mmiri Muros na ala Noia. Ha na-enye ụfọdụ ọrụ na-atọ ụtọ, dịka friji zuru ezu na nri ụtụtụ obodo, yana ịnabata anụ ụlọ.
Lọ Rural Rectoral
Dị ka aha ya na-egosi, ụlọ ime obodo a dị na ndagwurugwu Galician ochie, ụlọ e ji nkume mara mma weghachite mana nke a gbalịrị iji chekwaa ọdịdị oge ochie nke nkasi obi niile dị ugbu a. Na ụlọ sitere na narị afọ nke iri na asaa wee pụta maka ụlọ elu ya siri ike. O nwere nnukwu ubi izu ike na ebe a na-ere nri ebe ha na-eri nri ndị Galician na-achọsi ike. Ọ dị n’obodo O Covelo na Pontevedra.
Ferlọ Rural A Fervenza
Ulo ime obodo a mara mma Ọ dị n’ógbè Lugo, kilomita ole na ole site na obodo mgbidi. Ọ bụ ụlọ ochie ọzọ sitere na narị afọ nke iri na asaa ka emezigharị ma dị na mpaghara dị jụụ. Ọ dị n'oké ọhịa echekwara aha ya sitere na nsụda mmiri dị nso nke enwere ike ileta, ebe ọ bụ na Galician 'fervenza' pụtara nsụda mmiri. Ọ nwere ụdị ọmarịcha obodo nke nwere arịa ụlọ n'ime. Na mputa ya nwekwara ebe igwu mmiri iji nwee ike ịnụ ụtọ oge ọkọchị ezigbo ịsa ahụ nke obi iru ala gbara gburugburu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ime ụlọ dị na Galicia, atụmatụ na echiche iji nọrọ